Naya Bikalpa | नेकपा फुटपछि कता लाग्ने ? बामदेवलाई निर्णय गर्नै सकस ! - Naya Bikalpa नेकपा फुटपछि कता लाग्ने ? बामदेवलाई निर्णय गर्नै सकस ! - Naya Bikalpa
नेकपा फुटपछि कता लाग्ने ? बामदेवलाई निर्णय गर्नै सकस !
प्रकाशित मिती: २०७७ पुष २३, १४: ३१: १३
काठमाडाैं- नेकपा फुटबारे माैन रहेका उपध्यक्ष बामदेव गाैतमले तिन हप्तामा आफ्नाे माैजता ताेडेका छन् । नेकपा भित्र प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड- माधव समुहमा कता लाग्ने भन्ने बारे गाैतमले अझै निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
नेकपाका नेता वामदेव गौतमले हाल आफ्नो दल दुई समूहमा विभाजित देखिए पनि आफू कुनै समूहमा नभएको बामदेवले दावी गर्दै आएका छन् । विहिबारकाे राष्ट्रियसभाको बैठकको विशेष समयमा बाेल्दै गाैतमले प्रश्न गरे , “तीन वर्षमा पार्टी विभाजन गर्नु थियो भने एकता किन गर्नुपथ्र्याे ? पार्टीमा अन्तरपार्टी सङ्घर्ष र वादविवाद हुन्छ तर नेता त्यो हुन्छ जसले ती विवादमा समाधान दिन सक्छ ।”
पार्टी विभाजनको कुनै औचित्यता नरहेको बताउँदै नेकपा उपाध्यक्ष गौतमले पार्टीका नेताहरुको कार्यशैलीमा सुधारका लागि आफूले प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरे ।
आफू विभिन्न कारणले विरोधी जस्तो भएर बस्नुपरेको गुनासो पनि उनले राखे। पछिल्लो समय आफू निरन्तर पार्टी एकतालाई जोगाउन लागिपरेको र अविश्वासको प्रस्तावलाई पनि असफल गराएको जानकारी दिँदै नेता गौतमले भने, “आरोपप्रत्यारोपका पत्र राख्दा पनि यो एउटा सुधारका निम्ति उपाय हुन सक्छ भन्ने लागेको थियो । यसपटक प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्दा पनि मलाई थाहा भएन ।”
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषय सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लगिएपछि विचाराधीन भएकाले अहिले असंवैधानिक भनेर भन्न नमिल्ने बताउँदै नेता गौतमले त्यसैले आफू चुप लागेको छु भने । नेकपाले संविधानको सर्वाेच्चतालाई आफ्नो मूल सिद्धान्त बनाएको उनको भनाइ थियो ।
२०७७ पुष २३, १४: ३१: १३